Weftigii uu hoggaaminayay Murrashaxa Xisbiga KULMIYE oo Kulan la qaatay Masuuliyiinta ku hawlan la dagaalanka Xanuunka Shuban Biyoodka – WARSOOR
Burco – (warsoor) – Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE iyo Wefti miisaan leh oo uu hoggaaminayo ayaa kulan xogwaraysi ah la qaatay Masuuliyiinta Gobolka Togdheer iyo hawlwadeenada ku hawlan gurmadka shuban biyoodka ee Magaalada Burco.
Masuuliyiinta Gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay xaalada shuban biyood ee guud ahaan Gobolka , Badhasaabka Gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleban iyo Maayirka Magaalada Burco Cabdikariim Muraad ayaa sharaxay xaalada guud ee Gobolka iyo degmada Burco waxaana ay sheegeen inay Magaalada Burco ilaa hadda ka hawlgalayaan 30 baabuurta caafimaadka ee deg dega ahi.
Dhakhaatiirka ka shaqeynayay Cusbitaalka Guud ee Burco ayaa sheegay in 24 Saacadood ee u dambeeyay Cusbitaalka Burco la keenay 262 ruux oo looga shakiyay shuban biyood. Waxaana ay sheegeen in 130 laga helay Xanuunkaasi inta kalena ay ahaayeen Shuban caadiya.
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Sacad Cali Shire ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in gurmadka Xanuunkan iyo Xogtiisaba la midheeyo isla markaasna loogu taageero Wasaaradda Caafimaadka iyo dhakhaatiirteeda.
Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyadda Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in isku duubnaan iyo cudud midaysan lagaga jawaabo xakamaynta xanuunka shuban biyoodka isaga oo sheegay inay Xukumad ahaana arrintaasi isu diyaariyeen.
Sidoo kale Wasiirka Madaxtooyada waxa uu go’aamiyay in si deg deg ah loosoo afjaro faafista xanuunka Shuban Biyoodka isaga oo soo jeediyay in la ilaalinayo nadaafada xabsiyada sidoo kalena waxa uu xoogiyay in la fasaxo dhamaan goobaha Waxbarashada si aan cudurku u sii faafin.
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE waxa uu sheegay in xaalad oo kale bulshadu u baahan tahay inay la socdaan wararka rasmiga ah ee hadba kasoo kordha xaalad caafimaadka isla markaasna Wasaarada Caafimaadka looga baahan yahay inay si joogto ah Warbaahinta ula wadaagto Xogta rasmiga ah ee xanuunka shuban biyoodka si looga fogaado warar been abuur ah .
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE sidoo kale waxa uu sheegay inay taageerada lagu gargaarayo dadka tabaalaysan ee xanuunku haleelay in lagu hagaajiyo Wasaarada Caafimaadka si aanay caqabado kale uga dhalan Gurmadka.
Wasiirka Madaxtooyadda oo Sheegay in Xaaladda Gobolka Togdheer ay Dagan tahay